Nei Tisingambo Tombo Press Press Regedza Sevhisi Services Zvakare | Martech Zone
Mumwe wevatengi vedu akatishamisa nhasi, vakatiudza kuti vakasaina a Dhinda Rakabudisa Kuparadzira sevhisi inokurudzirwa nemumwe wavo wavanogona kuendesa kuburitswa kwavo kune anopfuura mazana mashanu masayiti akasiyana. Ini ndakabva ndagomera… heino chikonzero:
Dhinda Regedza Distribution services usatarise izvo zvemukati zvaunosimudzira zvachose, nekudaro kunze kwekunge mumwe munhu achinyatsoteerera kune chaiwo mapepanhau, ivo havawanzo kuwanikwa mumitsva yekutsvaga.
Press Regedza Distribution masevhisi akakundwa nekutyisa, hazvirevi makambani. Icho chinongedzo chinoguma chinowanzoda kutenderedzwa muWebmasters kudzora njodzi yekukuvadza yako yekutsvaga injini mhedzisiro.
Press Regedza Distribution masevhisi ari zvisina basa. Patakapedzisira kuvashandisa taizoona pasina traffic uye hapana chinokanganisa vashanyi, kutsvaga, kana chero chimwe rubatsiro.
Kana zvichinzwika zviri nyore, imhaka yekuti ndizvo. Uye hazvisi izvo chete zvakareruka, kushandisa mashoma madhiri nhasi kunogona kukonzera iwe zviuru zvemadhora munguva yakashandiswa gare gare kutsvagisa uye disvow zvinongedzo.
Dhinda Regedza Kusimudzira pamusoro peKugovera
Kana iwe uchinyatsoda kusvika pamberi pevateereri chaivo pamasaiti akakodzera, maitiro akanakisa kwauri ndeyekugadzira rondedzero yenzvimbo dzakananga uko zvirimo zvako zvinonyanya kukosha uye iwo masosi ane chiremera online. Nzira huru yekutarisa kukosha iri kuburikidza nepo iripo injini yekutsvaga masosi uchishandisa chishandiso senge Semrush kana mukurumbira kuburikidza nesaiti senge Buzzsumo.
Kana iwe uchikwanisa kuona makumi maviri neshanu kusvika makumi mashanu emasaiti ayo ane chiremera uye anozivikanwa pane iwo musoro, izvozvi unogona kuita kuchera uye kuona maitiro ekuonana nemuridzi wesaiti. Mapuratifomu akafanana Cision ipa kambani ine nzira yekunangisa uye meseji vanokurudzira kubva kune iwo masaiti. Masystem avo anopawo sarudzo dzekugadzirisa zvikumbiro zvakadzokororwa, kushuma nezvekukanganisa kwehukama hwako neruzhinji, uye kunyange kubvumidza mhinduro kana kubuda kubva kumutori venhau wakanangwa kana kufurira.
Pedza imwe nguva uchigadzira yakakura tambo. Verenga zvinyorwa zvishoma kubva kune inokurudzira nzvimbo kuti uwane manzwiro erudzi rwekunyora rwavanoita uye neruzivo rwupi rwavangangoda. Wobva wagadzira meseji kwavari uchivazivisa pamusoro penyaya dzako, ndeipi kona yainogona kupihwa pane saiti, uye upe chero imwe midziyo senge mifananidzo kana mavhidhiyo kuitira kuti anokurudzira agone kuisa pamwechete chinyorwa.
Nemutengi uyu, isu takave navo pane imwechete kiyi terevhizheni inoratidzira mudunhu, takavaita kuti vataurwe mune yega yega yedunhu bhizinesi nhau sosi, uye takave nezvakawanda zvakataurwa pane akakosha zvinyorwa muindasitiri. Iko kukanganisa kwese kwave kuchishamisa uye saiti iri kuenderera mberi nekumira zvakanaka kune akakosha mazwi akakosha.
Nekudaro, tichipihwa kugovera uku, isu tave kutofanirwa kuongorora saiti yeasina kunaka backlinks sezvo isu tisingade avo ehupenyu ekutsvagisa masosi kuti atambure kana Google ichitenda kuti vari kunze kwekuparadzira nzvimbo dzePR dzekuparadzira backlinks. Nekudaro, kwete chete kuti kugovera hakuna kushanda, kuri kutiitira kuti tiwedzere kushungurudzika apo isu tichiongorora masosi enzvimbo uye organic organic injini yekutsvaga.
Tags: Backlinksbuzzsumocisionprpr kugoveramupepanhaumuchina wekuburitsasemrush
Humera Zvemagariro: Gadzira, Ongorora, uye Gadzirisa Yemagariro Chat Bots